Lasopy holatra fandrahoan-tsakafo miaraka amin'ny paty akoho sy varika - Recipe
Akoho, holatra, paty vary - mamy! Ary mahasoa! Ny lasopy mofom-bary dia tsy sakafo matsiro ihany, fa mahasoa ny vatana koa!
Lasopy akoho - fomba fahandro matsiro, mora ary mahasalama
Lasopy matsiro sy maivana, ny mpikarakara tokantrano rehetra dia tokony hanana fomba fahandro amin'izany. Rehefa dinihina tokoa, ny fampianarana voalohany dia tsy matsiro ihany, fa tena ilaina amin'ny vatana koa!
Mofomamy Strudel puff
Tena matsiro sy toa mahazatra - pie misy sosona na Strudel, tonga tao aminay avy any Gresy ary "novaina" tany Alemana.
Amin'izao fotoana izao, misy fomba fahandro marobe ho an'ny Strudel pie, azonao atao ny manampy fameno isan-karazany, fromazy, voaloboka, paoma ary ny hafa. Betsaka ny olona no manendy an'i Strudel amin'ny trondro mena ary manondraka masira aza!
Salady miaraka amin'ny caviar sy salmon - fomba fahandro marobe
Isika rehetra dia tia caviar mena, matetika dia tsy maintsy hita eo amin'ny latabatra fety izany. Saingy salady inona no niandohany nahandro tamin'ny caviar sy trondro mena? Izahay dia nanomana karazana fomba fahandro ho an'ity sakafo matsiro ity!
Olivier - fomba fahandro tsy mahazatra
Ny ankamaroan'ny mpiray tanindrazana amintsika, araka ny fomban-drazana, ankoatry ny zavatra hafa, dia hanomana salady "Olivier" sy "Herring ambanin'ny akanjo volom-borona." Ireo salady matsiro ireo dia notiavina hatrizay, tsy teto amintsika ihany, fa hatrany ivelany koa, ary ...
Voatavo nendasina lafaoro - fomba fahandro
Amin'ny fararano dia maro ny olona mahatadidy ny voatavo, tsy noho ny Halloween fotsiny, fa koa satria nisy fijinjana vaovao niseho. Fa ahoana no mahandro voatavo amin'ny fomba natoraly sy matsiro? Inona no hanendasana azy?
Ahoana no hitahirizana sakafo? - fomba fahandro sy toro-hevitra mahasoa
Te hahafantatra ny fomba fitehirizana tsara indrindra ny sakafo ianao, inona no hatao amin'ny mofo maina? Hilaza aminao toro-hevitra sy fomba fahandro mahasoa roa izahay.
Resipeo ho an'ny pancakes kefir manify matsiro
Natokana ho an'ireo rehetra tia pancakes, matsiro, manify, feno holatra! Raiso ny fandresena tsikelikely ary ankafizo ny mamy!
Resipeo ho an'ny saosisy mafana sy sandwich amin'ny fromazy ao anaty lapoaly
Sandwich tsotra nefa matsiro. Ny fomba fahandro dia hahafaly ireo tia snacks haingana.
Resipeo lasopy erak'izao tontolo izao
Ho an'ireo izay tia zavatra tsy mahazatra, ho an'ireo izay mihinana tsy ny borscht mahazatra ihany. Nanomana fomba fahandro 4 ho an'ny lasopy avy amin'ny firenena samihafa izahay.
Lasopy hena - Resipeo maromaro
Nifidy ho anao ny fomba fahandro marobe, lasopy matsiro miaraka amin'ny hena meatball! Misy ny fomba fahandro ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe tia sakafo masiaka!
53 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 9,330.